‘निर्मला पन्तका बलात्कारी खै’ भनेर प्रश्न सोध्नेलाई पक्राउ गरिएकोमा देउवाको आपत्ति, रिहा गर्न माग - Sankalpa Khabar
5. यसकारण लम्बिदैछ अदालतमा बहस,अब कति समय लाग्छ कस्ले दिने जवाफ ?
‘निर्मला पन्तका बलात्कारी खै’ भनेर प्रश्न सोध्नेलाई पक्राउ गरिएकोमा देउवाको आपत्ति, रिहा गर्न माग
२४ पुष २१:०४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निर्मला पन्त हत्याका दोषी खै’ भनेर प्रश्न सोध्ने युवालाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । कैलालीको धनगढीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरेको सभाबाट पक्राउ परेका युवाहरूल ‘निर्मला पन्त हत्याका दोषी खै’ भन्ने लेखेको टिसर्ट लगाएका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सभापति देउवाले धनगढीमा ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै’ लेखिएको टिसर्ट लगाएर न्याय मागेका युवाहरुलाई प्रक्राउ गर्ने सरकारी कदम निन्दनीय भएको बताउँदै रिहाइको माग गरेका हुन् ।
उनले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका नागरिकलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् ।
‘धनगढीमा ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै’ लेखिएको टिसर्ट लगाएर न्याय मागेका युवाहरुलाई प्रक्राउ गर्ने कार्य एकदम निन्दनिय छ । दोशीलाई कारबाहीको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका नागरिकलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मुल्यरमान्यता विपरित हो । पक्राउ परेकालाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ‘निर्मला पन्तका बलत्कारीलाई पक्राउ गर’ भन्नेलाई नभएर वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। आज धनगढीमा भएको नेकपाको सभास्थलमा सेतो टिसर्टमा कालो अक्षरले ‘निर्मला पन्तका बलात्कारी खोइ रु’, ‘निर्मलालाई न्याय दे’लेखेर पुगेका युवाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सन्दर्भलाई लिएर प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जालमा सो प्रश्न गरेका हुन् ।
थप ३ सय २२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, आज…
५ माघ १६:५७
कस्तो हुनेछ आजकोे मौसम ?
६ माघ ०८:१७
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएका दुई प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन…
७ माघ ०८:१२
ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिदै ट्रम्पले भने, ‘अमेरिका कातर आत्माहरूको कातर…
७ माघ ०७:२६
भारतको कोरोना खोप निर्माता कम्पनि सीरम इन्स्टीट्युटमा आगलागी
८ माघ १८:४५
८ माघ १८:४०